My Talking Tom21.5.1.587 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.5.1.587 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ My Talking Tom 2
My Talking Tom2၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အကြှနျုပျ၏ဖွယ်ပြောစကားတွမ်၏ဖန်တီးသူကနေအသစ်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်း, ငါ၏ဖွယ်ပြောစကားတွမ်2ကြွလာ! မိမိအအေးမြအခမဲ့ဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့သစ်ကိုကို virtual အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွမ်နှင့်အတူ Play နှင့်သင့်အသက်တာ၏စွန့်စားမှုပေါ်သွားပါ!
ချစ်စရာ၏ရှငျဘုရငျ: ဖွယ်ပြောစကားတွမ်အရင်ကထက်, cuter သွားကြသောနှင့်ပိုပြီးကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောသည်။ သူကသင်ပြုသမျှကိုမှဓာတ်ပြုပြီးနှင့်အသစ်အံ့သြဖွယ်များနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှိပါတယ်!
နေ့စဉ် FUN: သူသည်မွတ်သိပ်သောအခါတွမ် Feed သူညစ်ပတ်င်သည့်အခါသူ့ကိုလျှော်သူပင်ပန်းင်သည့်အခါအိပ်ရာသူ့ကိုထား, သူသည် ... တကယ်သွားဖို့တယ်နေသည့်အခါအိမ်သာမှသူ့ကိုယူပါ! သူ့ကိုကြီးမားတဲ့ပျော်ရွှင်ကြောင်တစ်ဦးကလေးကနေကြီးထွား Watch!
အပိုဂရုပွု: တွမ်တခါတရံနေမကောင်းရရှိသွားတဲ့, ဒါကြောင့်အခုသူအရင်ကထက်ပိုပြီးသင်လိုအပ်ပါသည်။ သူကတစ်ဦး booboo ရရှိသွားတဲ့သောအခါ, ဆေးဝါးဝန်ကြီးအဖွဲ့ကိုသွားနှင့်သူသည်ဆင်းရဲသောသူအနည်းငယ်သာကောင်လေးပိုကောင်းခံစားရပါစေ။
ကစားစရာနှင့်အတူဆော့ကစား: ဘတ်စကက်ဘော hoops ရိုက်အဆိုပါလွှဲအပေါ်တွမ်တွန်းဒါမှမဟုတ် trampoline အပေါ်ခုန်သွားပါ။ တွမ်ယခုကစားစရာအပြည့်အဝတစ်သေတ္တာရှိပြီးထိုလူအပေါင်းတို့သည်သူ့ကိုပျော်ရွှင်စေ!
Tom ကောက်: သင်လေထဲသို့သူ့ကိုချီကြွလာသောအခါတွမ်ကချစ်တော်မူ၏။ သူ့ကိုကျဆင်းနေ, ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုပစ် ချ. သူ့ကို spinning ကြိုးစားပါ။ သင်ပင်အိပ်ရာသို့, ဒါမှမဟုတ်မိမိအအေးမြလေယာဉ်သို့, အိမ်သာရက်နေ့တွင်, ရေချိုးအတွက်သူ့ကိုထားနိုငျသညျ!
NEW ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်: တွမ်ရဲ့လေယာဉ်အတွက် Fly နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုကမ္ဘာတွေ့ရှ။ အံ့သြဖွယ်ဘဏ္ဍာကိုပြန်ယူခဲ့ခြင်းနှင့်ဖွင့်တွမ်ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်မိမိအိမျကိုအလှဆင်ဖို့သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။
အစည်းအဝေး Tom'S အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ: ဟုတ်ပါတယ်, တွမ်လွန်းတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိပြီး, ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လေးကပိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှိပါတယ်! တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်းကိုယ်ပိုင်ကြည့်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပါတယ်။ တဦးတည်းအစာကျွေးကြိုးစားပါနှင့်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရ!
NEW MINIGAMES: ကစားရန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က minigames ပဟေဠိဂိမ်းအရေးယူဂိမ်းများ, နဲ့ Tom ရဲ့ပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက် multiplayer minigame အပါအဝင်ရှိပါတယ်!
"ကျနော့်ဖွယ်ပြောစကားတွမ် 2" အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦး optional ကို In-app ကိုဝယ်ယူအဖြစ်နောက်ထပ်အထူးသီးသန့်ဂိမ်း features တွေနှင့်အတူတစ်ဦးသီးသန့်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းပေးထားပါတယ်။
- Mini-ဂိမ်းကစားဘို့အ Mini-ဂိမ်းနှင့်န့်အသတ်စွမ်းအင်နှုန်း 4x ကစားပြန်လည်စတင်ဖို့ option ကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းဂိမ်းကစားသူအထုပ် (ဂိမ်းကစားခြင်းလစဉ်ကြေးပေးသွင်း) လစဉ်အခြေခံပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်တစ်လလျှင် 5,99 မှာစျေးနှုန်း, ပထမဦးဆုံးလငွေပေးချေမှုနှင့်အတူ -50% လျှော့ ($ 2.99) ။
- နေ့စဉ် packages များ (750 လေယာဉ်ခရီးစဉ်တိုကင်,2ဆပ်ပြာ,3အစားအစာများ) ကမ်းလှမ်းကြောင်း Daily သတင်းစာအထုပ် (တွမ်ရဲ့လစဉ်ကြေးပေးသွင်း) လစဉ်အခြေခံပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်ပထမဦးဆုံးလငွေပေးချေမှုနှင့်အတူတစ်လလျှင် 5,99 မှာစျေးနှုန်း -50% ($ 2.99) လျှော့။
- Mini-ဂိမ်းကစားဘို့အ Mini-ဂိမ်းနှင့်န့်အသတ်စွမ်းအင်နှုန်း 4x ကစားပြန်လည်စတင်ဖို့ option ကိုလစဉ်အခြေခံပေါ်မှာမရရှိနိုင်ပါနှင့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်, နေ့စဉ် packages များ (750 လေယာဉ်ခရီးစဉ်တိုကင်,2ဆပ်ပြာ,3အစားအစာများ) ကမ်းလှမ်းကြောင်း VIP အထုပ် (VIP လစဉ်ကြေးပေးသွင်း) တစ်လလျှင် 9.99 မှာပထမဦးဆုံးလငွေပေးချေမှုနှင့်အတူ -50% ($ 4.99) လျှော့။
ဝယ်ယူမှု၏အတည်ပြုချက်ကိုမှာအကောင့် Play သင်၏ Google မှငွေပေးချေတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်လက်ရှိစာရင်းသွင်းခြင်းကာလမကုန်မီဘယ်အချိန်မဆိုဖျက်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်အဆိုပါကြေးပေးသွင်းအလိုအလြောကျလစဉ်လတိုင်းသက်တမ်းတိုးမည်။ သင့်စာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်သောအခါ, ဖျက်သိမ်းခြင်းလာမည့် subscription ကိုကာလအဘို့လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဝယ်ယူပြီးနောက်အကောင့် settings ကို Play သင်၏ Google သွားခြင်းအားဖြင့်သင့် subscriptions ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ app ကိုမဖျက်ပစ်သင်၏စာရင်းပေးသွင်း၏ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်ပါဘူးသတိပြုပါ။
ဒီ app များပါဝင်သည်:
My Talking Tom2အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
My Talking Tom2အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
My Talking Tom2အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
My Talking Tom2အား အခ်က္ျပပါ
mods-mods စတိုး 9.84k 1.22M
My Talking Tom2ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း My Talking Tom2အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.5.1.587
My Talking Tom2APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ